အဆိုပါ tundra ၏ကာဗွန် | အစိမ်းရောင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ
အဆိုပါ tundra ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု၏အရင်းအမြစ်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်
Fausto Ramirez | | CO2 ကူးယူ, ပတ်ဝန်းကျင်
အဆိုပါ tundra အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရေတွင်းဖြစ်ပါတယ် ကာဗွန်... အနည်းဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ ယနေ့ခေတ်တွင်သိုလှောင်နိုင်စွမ်းသည်အပူချိန်မြင့်တက်မှုကြောင့်အကြီးအကျယ်ပျက်စီးသွားသည် သက်ရှိများ လူနေမှုဘဝ အချို့သောအဆင့်များ၌ photosynthetic ဖမ်းယူသည့်ယန္တရားကိုသက်ရောက်နေစဉ်၎င်းတို့သည်လေထုထဲသို့ CO2 ပိုမိုထုတ်လွှတ်သည်။
ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့်အတူ သဘာဝပေါက်ပင် နှင့်သက်ရှိများပိုမိုထုတ်လွှတ်နိုင်ဘူး ကာဗွန်၏ပုံစံအတွက် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက် သိုသိုသိပ်သိပ်သိုသိုသိပ်သိပ်သိုသိုသိပ်သိပ်သိုသိုသိပ်သိပ်သိုလှောင်နိုင်သည်ထက်သိုလှောင်နိုင်သည့်မီသိန်း (သို့မဟုတ်) မီသိန်း။ ယခုဆယ်နှစ်ကျော်ကြာသည့်တိုင်သုတေသီများသည်သုတေသနဌာနတွင်အခြေချခဲ့သည် Zackenberg, ဂရင်းလန်းမြောက်ပိုင်းတွင်, tundra တစ်ခုလုံး၏ကာဗွန်ချိန်ခွင်လျှာကိုအကဲဖြတ်ရန် ခြမ်း မွောကျ.
ဂျာနယ်ထဲမှာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေလေ့လာမှုတစ်ခု ဘူမိရူပဗေဒသုတေသနဂျာနယ်ဦး ဆောင်သည့်အဖွဲ့ Magnus Lund သက်ရှိများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော CO2 ထုတ်လွှတ်မှုသည်အပူချိန်မြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှတိုးလာသည်ကိုပြသသည်။
သတ်မှတ်ထားရန် ကာဗွန်ချိန်ခွင် အဆိုပါ tundra ၏, သိပ္ပံပညာရှင်များနှစ်ခုပုံစံကိုလေ့လာခဲ့ကြ: ၏ပုံစံထုတ်လွှတ်ကာဗွန်နှုန်း CO2 အသက်ရှူခြင်းနှင့်အပင်များမှတဆင့်သိုမှီးထားသောနှုန်းသည် photosynthesis။ ဤသတ်မှတ်ချက်နှစ်ခုအရ Tundra သည်အရင်းအမြစ်ဟုတ်၊ မဟုတ်စမ်းရေတွင်းလားဆိုတာဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်နိုင်သည် ကာဗွန်.
El လေ့လာ တိရိစ္ဆာန်အသက်ရှူခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော CO2 ထုတ်လွှတ်မှုများသည်၎င်းနှင့် ဆက်စပ်၍ တိုးများလာသည်ကိုပြသည် အပူအအေး။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, နှင့်ဆက်စပ်သောကာဗွန်သိုလှောင်မှုစွမ်းရည် photosynthesis အပူချိန်တိုးအဖြစ်လျော့နည်းစေသည်။ ကြည့်ရသည်မှာဤ သိုလှောင်မှု ဘယ်တော့မှမရပ်ဘူး အပူအအေး 7ºCထက်ပိုသည်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက - ဂူးဂဲလ်က၎င်း၏ကာဗွန်ခြေရာကိုလူသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်သည်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အစိမ်းရောင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ » ပတ်ဝန်းကျင် » CO2 ကူးယူ » အဆိုပါ tundra ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု၏အရင်းအမြစ်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်
အကြောင်းမှာမြောက်ပိုင်း hemisphere တွင်ပိုမိုရွာသွန်းသည့်အကြောင်းရင်းများဖြစ်သည်